Momba anay - FUZHOU MIN-TAI MACHINERY CO., LTD
Fuzhou Min-tai Machinery Co., Ltd. naorina tamin'ny aprily 2005, dia niara-niasa tamin'ny orinasa taiza izahay tamin'ny voalohany, niaraka tamin'ny tombony azo tamin'ny teknika sy ny fitaovana, ny fanovana dia nanomboka nanitsy ny vokatra fambolena sinoa, mety kokoa amin'ny tsena.Misy atrikasa mihoatra ny 2000 metatra toradroa, afaka mamolavola, manamboatra, manangona ny masinina samirery isika. Injeniera mekanika am-polony, injeniera teknikan'ny fanodinana atody dia mifantoka amin'ny fikarohana ny fitaovana sy ny fizotran'ny teknolojia, fiaraha-miasa efa ela tamin'ny mpiara-miasa sy orinasa mpanodina atody, izay manampy anay hanambatra ny teôria amin'ny fampiharana. Nahazo ny mari-pahaizana orinasa HI-tech izahay nanomboka tamin'ny taona 2008 ka hatramin'ny 2021, mino izahay fa afaka manitatra ny vanim-potoana marim-pototra. Amin'izao fotoana izao dia i Mintai no mpilalao mitarika sy manamboatra fironana amin'ny tsena ao Shina izay manome ny famonosana atody tsara indrindra sy ny fametrahana naoty na grady. toeram-piompiana akoho nasionalyAndian-fanasana atody, grady atody ary andiana fonosana, andiam-borona mangotraka atody, andiana atody ranon-javatra no vokatra lehibe andiany efatra. Hatramin'ny feb 2019, manana fotodrafitrasa miisa 75 misy patanty amin'ny fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina ataonay izahay, izay manampy anay hijanona eo alohan'ilay anatiny.
Tao anatin'izay 14 taona lasa izay, milina fanendahana atody papelika voalohany any Shina, milina fanendahana atody akoho voalohany, milina fanadiovana atody voalohany, tsipika famokarana atody marinina voalohany sns manomboka amin'ny orinasa misy anay, manao azy sy manatsara azy izahay, isan-taona dia manana vokatra vaovao hotanterahina fangatahan'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifanay dia manampy azy ireo izahay ary mandritra izany fotoana izany dia manampy anay hanatsara ny masininay izy ireo.
Masinina mamaky atody mandeha ho azy, Masinina manendaka atody nandrahoina, Mpanamboatra masinina mamaky atody, Masinina fonosana atody, Masinina manasokajy sy milina fanangonana, Hatching atody Packer,